သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ...: အဖေဗိုလ်အောင်ဆန်းမှ သမီးအောင်ဆန်းအထိ
ရေးသားပေးပို့သူ - ဒေါင်းမာန်ဟုန်
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁၅)ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) က အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မြို့တော်ရှိ မြန်မာ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့၌ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒူးဝါးအောင်ဇော်ဦး၏ အဖေဗိုလ်အောင်ဆန်းမှ သမီးအောင်ဆန်းအထိ ဆုံတွေ့ခဲ့ရသော၎င်း၏ အတွေ့အကြုံပြောပြချက်များကို
မေး။ ။ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် ဒူးဝါးဘာကြောင့်မြန်မာပြည်ကထွက်ခွာခဲ့ပါသလဲ.....?
ဒူး။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်လာတုံးကလည်း ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်။ဒုတိယအကြိမ်လာတော့လည်း
ကျွန်တော့်အိမ်မှာပဲကြိုဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်။ ဒုတိယကြိမ်လာတော့လည်ွးန်တော့်အိမ်မှာပဲ ကြိုဆိုတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကချင်ပြည်နယ်ကဆင်းသွားပြီး မေ(၃၀) ရက်နေ့မှာ ဒီပဲယင်းပြဿနာဖြစ်တယ်။ ၃၁ ရက်နေ့မှာ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ NLD`ရုံးခန်းတွေပိတ်သွားတယ်။ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင်
ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့၊ ညသန်းခေါင်မှာ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းကထောင်ကြွေးလည်း ၁၈နှစ်၊ နှစ်(၂၀)ရှိသေးတော့ ထောင်ထဲမှာတော့ အသေမခံနိုင်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ပြည်သူလူထုအတွက် ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ အပြင်မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒူးဝါးအနေနဲ့ ပင်လုံညီလာခံမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြောပြပေးနိုင်မလား.....?
ဒူး။ ။ ပင်လုံညီလာခံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးပြောရရင် အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ၁၃-၁၄နှစ်သားအရွယ် နိုင်ငံရေးကို
၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လာတယ်။ အဲဒီအခါမှာဖိတ်တယ်။ မကြာခင်မှာ ပင်လုံညီလာခံကျင်းပမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေတက်ညီလက်ညီတက်ကြပါ။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းပန်းတသာ ပင်လုံတက်ခဲ့တယ်။ တိုတိုပြောရရင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆)ရက်နေ့။ ညနေ (၂)နာရီမှာ ရှမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ကချင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစည်းအဝေးလုပ်ရပါတယ်။ အချက် (၅)ချက်ဆွေးနွေးတယ်။ (၇)ရက်နေ့မှာ ချင်းကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦး ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့လဲသဘောတူတယ်။ (၈)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရောက်လာတယ်။ တောင်တန်းသားများရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကိုတင်ပြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လည်း အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရူပြီး အနည်းငယ်လိုအပ်တာကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတယ်။ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက်
(၉)နာရီလောက်ကစပြီးတော့ ပင်လုံညီလာခံတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောပါတယ်။ အခုလို တောင်တန်းသား သွေးချင်းသားချင်းညီအကိုများနဲ့ နိုင်ငံအကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွတ်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေက အင်္ဂလိပ်ကျွန် တရက်မှ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ ခင်ဗျားတို့တောင်တန်းသားများလဲပဲ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတာကို မကြည့်ရက်တော့ဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ရေထဲသောက်၊ တစ်မြေထဲပေါက်တဲ့သွေးချင်းသားချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခင်ဗျားတို့က ကျွန်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ လွတ်မြောက်ဆိုရင်လည်း မကောင်းဘူးတဲ့။ အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ပဲ ဆနွရှိပါတယ်တဲ့။
တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါ တောင်တန်းသားတွေဟာ ဗမာရဲ့ ကျွန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ရပါဘူး။ အားလုံးတန်းတူ မရှိမတူ ရှိအတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပဋိညာဉ်ပဲ။
နောက်ပြီးတော့ တောင်တန်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက် ၅ ချက်ဆိုတဲ့ အချက်များခွဲထွက်ရေးကိစ္စပါတယ်။ ခွဲထွက်ရေးဆိုတာက တကယ်လို့လိုအပ်ရင်ပေါ့လေ၊ အဲဒါကို ဗိုလ်ချုပ်ကပြောတယ်။ ခွဲထွက်ရေးဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုရဲ့ ဆနွဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလဲကျွန်တော်တို့က ပစ်ပယ်လို့မဖြစ်ဘူး။၊ စဉ်းစားရမယ့့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေက လူအများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သဘောထားအကြီးဆုံး စိတ်အရှည်ဆုံး သည်းအခံနိုင်ဆုံးလူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့က တောင်တန်းညီအစ်ကိုတွေအားလုံးက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သဘောထားကို အင်မတန်မှ တန်ဖိုးထားတယ်။
"ပင်လုံသဘောတူညီချက်ဟာ စာရွက်မှာရေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အသည်းနှလုံးထဲမှာသံမှိုနှက်တဲ့ပမာ ရေးထားရမယ်...." လို့ ဗိုလ်ချုပ်ကပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းကို ယုံကြည်ပြီးတော့ (၁) ကနေ(၉)ချက်ပါတဲ့အချက်ကို အတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါတယ်။
အချက်နံပါတ် (၆)မှာ ကချင်တွေဟာ တကယ်လို့ လွတ်လပ်ရေးရလာတဲ့အခါမှာ ကချင်သီးခြားလွတ်မြောက်ရေးနိုင်ငံ တည်ထောင်လိုပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့အခါမှာ
ဗိုလ်ချုပ်လည်းပဲ အဲဒီကိစ္စက အမှန်မှာ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးရမယ့့် ကိစ္စဖြစ်ပေမယ့် အခုလည်း ဆွေးနွေးဖို့မမေ့သင့်ဘူး...ဆိုပြီးတော့…အခုလည်း ပင်လုံညီလာခံအချက်တွေထဲမှာလေ့လာကြည့်ပါ။ ဒါက ဗိုလ်ချုပ်က တိုင်းရင်းသားအားလုံးအပေါ်မှာ စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားတဲ့သဘောပဲ။
မိန့်ခွန်းထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတာက ခွဲထွက်ရေးကိစ္စက သူ့လည်ပင်း ညှစ်ရင်တော့ ရုန်းထွက်မှာဘဲ။ မညှစ်ရင်တော့ မရုန်းဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဆိုတာ အားလုံးတက်ညီလက်ညီဆိုရင်တော့ဘာမှ ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့။ အဲ- ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်နဲ့ မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီး
သူ့လည်ပင်းမညှစ်နဲ့ပေါ့တဲ့။ အဆိုက အဲဒီလို အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင် ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကမခွဲထွက်ချင်အောင် မေတ္တာစေတနာပြပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုအကျိုးကို အတူလက်တွဲပြီးတော့ သွားရမယ်လို့ပြောတယ်။
မကြာခင်မှာဘဲ ၁၉၄၇ခုနှစ်။ အခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီးတော့ အဲဒီထဲကရေးခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေဟာ ၁၉၄၈ခုနှစ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ (၁၀) နှစ်ကျော်သုံးခဲ့တဲ့
အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို ဗိုလ်နေ၀င်းတက်လာပြီးတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒမပါဘဲ သူသွားတဲ့အခါမှာ လမ်းမှာ သစ်တုံးတွေ သစ်ငုတ်တွေရှိတဲ့သဘောနဲ့ အခြေခံဥပဒေ ၄၇ ကို ဖျက်ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်တာ။ မရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်။ အခု နအဖက အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတာ ကြာလာပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၃ရက်နဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ အခြေခံဥပဒေဘဲ၊ ပြင်ဆင်ပြီးသုံးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို မပြင်ဆင်ဘဲ အားလုံးဖျက်လိုက်တယ်။ ဘယ်ဟာကောင်းမလဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက
အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ။ ပင်လုံအတွေ့အကြုံက ဒီလောက်ပါပဲ။
မေး။ ။ဒူးဝါးအနေနဲ့ NLDပါတီ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လက်တွဲပြီး
ဒီမိုကရေစီအရေးဆောင်ရွတ်ရာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအရေး ကချင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြောပြချင်တာရှိပါသလဲ။
ဒူး။ ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မဆလပြုတ်သွားပြီး ပါတီစုံထောင်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော် ရှစ်လေးလုံးမှာလည်း
မီးကုန်ယမ်းကုန်လှုပ်ရှားတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ပြည်သူလူထု ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားတွေကို သတ်ဖြတ်တယ်။ စိတ်မချမ်းမြေ့တဲ့အတွက် တော်လှန်တယ်။ ဒေါ်စုကို ၁၉၈၉ ဇန်န၀ါရီလမှာ ရန်ကုန်မှာ သွားတွေ့ပြီး အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။ အဖေလက်ထက်ကလည်း ဒီလိုဒီလိုပဲဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စည်းရုံးရေးတာဝန်ယူပါဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် လတ်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ကချင်ပြည်နယ်မှာ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက် ဒီမိုကရေစီအရေးသွားပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကချင်ပြည်နယ်လာတော့ ကချင် လူထုတစ်သောင်းကျော်
သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက် ၀မ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုခဲ့တယ်။
ပထမအကြီးဆုံးက ဘုရားကျောင်းမှာ၊ ဒုတိယအကြီးဆုံးက ကျွန်တော့်အိမ်မှာလို့ပြောရင် မှားမယ်လို့ မထင်ဘူး။ သူ့ကိုလဲ "မရမ်နန်အောင်ဆန်း" ဆိုပြီးတော့ ကချင်နံမည် မှည့်ပါတယ်။
ဒေါ်စုကလည်း တိုင်းရင်းသားများနဲ့တွေ့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာတယ်။ ကချင်နံမည် ကင်ပွန်းတပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ်။
"ကျမကလည်း တိုင်းရင်းသားအားလုံးအပေါ်မှာ သွေးချင်းသားချင်းညီအကိုအရင်းချာလိုပဲ အမြဲတမ်းသဘောထားပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးတော့ရပြီ၊ ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူး၊ ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီရအောင် တနိုင်ငံလုံး တပြည်လုံး တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားကြရမယ်" ဆိုပြီးတော့ မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။
မေး။ ။ ဒူးဝါးအနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့လည်း ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လဲ တိုင်းပြည်အကျိုး အတူတကွ
ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုများ စိတ်ခံစားမှု ရှိခဲ့ပါသလဲ...?
ဒူး။ ။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ရှေ့မှီ နောက်မှီ ဒူးဝါးများလည်း ရောက်လာပြီး
ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့လည်း နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ နိုင်ငံအကျိုးဆောင်ရွတ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မျက်နှာကွယ်သွားတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ရင်သွေးသမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြန်တွေ့တဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပြန်တွေ့သလိုပဲ ခံစားရပါတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း လိမ္မာတယ်။ ကျမတို့လည်း ဒူးဝါးကြီးတို့ခံစားသလိုဘဲတဲ့။ အဖေနဲ့အတူ တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဒူးဝါးတို့နဲ့ပြန်တွေ့ရတာ အဖေနဲ့ပြန်တွေ့ရသလိုဘဲ ခံစားရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တိုင်းရင်းသား တောင်တန်းသားတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာစေတနာနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် သူ့သမီးရင်သွေးလည်းပဲ အဖေတစ်ကျပ်လုပ်ရင် သမီးလဲ တစ်ကျပ်ထက်မလျှော့တဲ့ တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးကို ရိုးရိုးသားသား ဆောင်ရွတ်မှာဘဲလို့ တစ်ထစ်ချခံစားယုံကြည်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်း တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာ တန်းတူဆက်ဆံပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်ရွတ်ခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တစ်သဘောတည်း ခံယူထားတဲ့အချိန်မှာ လက်ရှိတိုင်းပြည်ကို မတရားအာဏာယူထားတဲ့ စစ်အာဏာပိုင်တွေက
တိုင်းရင်းသားတွေရော ပြည်သူလူထုကိုပါ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး သူတို့အာဏာဆက်ပြီး မြဲဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာ ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
ဒူး။ ။ အဲဒါ သူတို့မှားတာဘဲ။ တပ်မတော်က မိုးပေါ်ကကျလာတဲ့ တပ်မတော်မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူကမွေးဖွားတဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်ကာကွယ်ဖို့ ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ တိုင်းရင်းပြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ် အဲဒီလိုလုပ်တာတော့ မတရားဘူးပေါ့လေ။ လူသတ်ဝါဒဟာမအောင်မြင်ဘူး။နာဇီ ဟစ်တလာက
ကမ္ဘာမှာသန်းနဲ့ချီတဲ့လုတွေကိုသတ်ခဲ့တာ နောက်ဆုံးမှာ ထွက်ပြေးရတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေရတယ်။ လူသတ်ဝါဒကို ဆက်သုံးရင်တောသူတို့လဲ
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ မပြောင်းလဲရင် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ နေလိုလလို မထွန်းပြောင်ဘဲ မကျည်းရွက်လောက်မရှိတဲ့ မျက်နှာငယ်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဖြစ်သွားမယ့့် အတွက်ကြောင့် ရေတွေပြန်မကျခင်မှာ အမြန်ဆုံးကမ်းနားဖို့ရာအတွက် တိုင်းပြည်အကျိုးကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲပါလို့ နအဖ ကို ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ။
Posted by Adminstrator at 8:01 PM
Labels: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း, ပြည်ထောင်စုနေ့
Htat Aung said...
trsdK;om;acgif;aqmif}uD;eJhawGhqHkcJhbl;ol/EdkifiHa&;tjrif&Sdol awGudk tifwmAsL;vkyfwmtifrwefaumif;w,f/aemifudkvJ tqifoifh&if tn}wawmfvSefa&;&Jabmfrsm;eJhvnf;vkyfapcsifygw,f